ZANDARY SY NY CISCO AO MITSINJO : Nahazo moto 7 avy tamin’ny solombavambahoaka Alidy
Mandeha ary mitohy hatrany ny ezaka fampandrosoana ataon’ny solombavambahoaka Alidy, izay voafidy tamin’ny anaran’ny antoko Mapar ao amin’ny disitrikan’i Mitsinjo. 26 septembre 2018
Rehefa avy nanao fanamboarana ny lalana izay miteraka fiakaran’ny rano ho an’ireo mponina ao Mitsinjo izy sy ireo mpiara-miasa aminy dia nojerena manokana indray izao ny sehatry ny fampianarana sy ny tsy fandriampahalemana. Noho izany dia natolotra ny mpitandro filaminana ny alatsinainy teo ny moto tsy mataho-dalana miisa 6 izay ny zandary ao Mitsinjo no nandray izany.
Ankoatra io dia nojerena manokana ihany koa ny fanabeazana ao an-toerana. Araka izany dia moto iray amin’io 7 io no natolotra ny lehiben’ny Cisco tao an-toerana. Mitovy moa ny tanjona amin’ny fanomezana ireto fitaovana ireto na dia sehatra samihafa aza izy ireo nefa misy ifandraisany ihany. Tsy handeha mihitsy mantsy ny fampianarana raha tsy misy ny fandriampahalemana. Ao anatin’ny distrikan’i Mitsinjo no ahitana kaominina tena milomano ao anatin’ny asan-jiolahy.
Ampiasain’ireo zandary hiatrika ny fampandriana fahalemana ao an-toerana ireto fitaovana vaovao ireto. Ny an’ny sefo Cisco kosa dia hoenti-manara-maso ny lafin’ny fampianarana amin’ireo kaominina manodidina ihany koa no tanjona tamin’ny fanomezana izao moto iray izao. Nanao antso avo moa ny solombavambahoaka Alidy mba hanaja sy hampisy vokany amin’ireto fitaovana natolony ireto. Tokony hisy fiantraikany mivantana any amin’ny vahoaka ao Mitsinjo mantsy izy ireo fa tsy natao hilibana fotsiny ho an’ireo izay nanolorana azy.
Nisaotra ary nanome toky ny avy amin’ny zandary fa vonona hanao ny asan’izy ireo antsakany sy andavany ary nilaza fa tsy ho ela dia hisy ny vokatra azo tsapain-tanana amin’ny fampiasana ireto fitaovana ireto. Ny lehiben’ny Cisco indray dia nilaza fa ho voara-maso amin’ izay ny fampianarana amin’ireo kaominina lavitra tanàna manomboka izao ary antenaina hisy ny vokatra tsara eo amin’ny fanadinana, indrindra ny ara-panjakana. Marihina fa vola avy tamin’ny CLD ho an’ny disitrikan’i Mitsinjo no nahafahana nivi dy ireto moto ireto.